ရှင်အဇ္ဇဂေါဏနှင့် ကျော်စွာ၊ သော်တာ
ဦးထွေးဟန် (၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၇ ရက်)။ မြန်မာ့မိရိုးဖလာဓလေ့ နတ်သမိုင်း။ အမှတ် - ၅၊ တင့်ဆန်းလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ရွှေပုရပိုက်စာပေ။ pp. ၁၉၃၊ ၁၉၄၊ ၁၉၅၊ ၁၉၆။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)CS1 maint: location (link)
ဦးစန္ဒိမာ(စလင်း). "လွန်ဆွဲခြင်းနှင့် မိုးခေါင်ကျော်စွာနတ်". စံတော်ချိန်နေ့စဉ်. Retrieved on4August 2020.